Izindlu Zokubhuka Zezikhathi Zokuhlala Ekhaya | Izincwadi Zamanje
Izikhathi ukuba sekhaya wemfanelo nempilo. Abanye bazobenza babe babi kakhulu futhi abanye babe ngcono, futhi kungaba njalo incwadi kubo ukuhamba nathi. Ibaluleke kakhulu empilweni yangempela, manje sesibheka izindlu zethu, njengoba besingakaze sicabange, ukubaluleka kokuba nazo noma ukuhlala kuzo. Futhi ezincwadini nabo isigaba nomlingiswa wezindaba eziningi ezinhle Kuzo zonke izinhlobo. Lezi izi Iziqu ezingama-6 kukhethwe kuphi izindlu, mansions nemizi mihle kakhulu protagonists.
1 Indlu emnyama - uStephen King noPeter Straub
2 Indlu yeBleak - uCharles Dickens
3 Indlu Yemimoya - Isabel Allende
4 Imfihlakalo yeCasa Aranda - uJerónimo Tristante
5 Indlu Eyisigwegwe - Agatha Christie
6 Ukuwa kweNdlu ka-Usher - u-Edgar Allan Poe
Indlu emnyama - UStephen King noPeter Straub
Ama-greats amabili asabekayo afana neKing neStraub ashicilele le noveli ngemuva kwalokho Umkhuhlane, okokuqala babhala ndawonye. Nginenkanyezi ku UJack sawyer, futhi nakhu ekwenza futhi endabeni emthatha adlule imihlaba emibili efanayo, leyo ye Izindawo, lapho ayezosindisa khona unina, kanye nowangempela. Manje, nokuba owayengumphenyi wecala lokubulala, UJack se thenga indlu edolobheni laseWisconsin. Akakhumbuli lutho ngohambo lwakhe lokudabula iTerritories, kodwa kwakudingeka ashiye amaphoyisa aseLos Angeles lapho umcimbi wammaka ngokungaqondakali.
Manje, ngenxa yabathile ukubulala kulelo dolobha futhi lapho umphathi wamaphoyisa wendawo emcela usizo, uJack wesaba ukuthi imibono engajwayelekile lokho kumdonsele kuleso sikhathi esedlule sezifunda. Y ukubhekana nokubi okumzungezile kuzofanele angene kuleyo Ndlu emnyama.
Indlu eyincithakalo - UCharles Dickens
Le ndlu yeBleak yiyona ukuhlala lapho i-protagonist ihlala khona, U-Esther Summerson, eyashiywa ngabazali bayo. Kuvikelwe kusuka ku- UJohn jarndyce, umnumzane onenhliziyo enhle, sekunesikhathi eside elwa ngenxa ye- herencia. U-Esther uhlala ndawonye no U-Ada noRichard, abazala bakaJohn, izintandane nabampofu ngenxa yefa, naye azama ukubasiza. Esther, kumuntu wokuqala, naku- umxoxi wezindaba bayabala indaba yakhe yokulwa ngokuthola ubunikazi nokuphumelela emphakathini.
Indlu Yemimoya - U-Isabel Allende
Kuyinto inoveli yokuqala we-Allende. Isitshela indaba ka umndeni onamandla wabanini bomhlaba baseLatin America eholwa ukhokho U-Esteban Trueba. Umbuso wakhe owakhiwe ngesibhakela sensimbi uqala ukuwohloka ngenxa yokuhamba kwesikhathi kanye nezinguquko zomphakathi ezizungezile. Kepha nomndeni wakhe uphukile. I- inguqulo yefilimu wama-90 nawo aphumelela kakhulu.
Imfihlakalo yeCasa Aranda - UJerónimo Tristante
El isihloko sokuqala lapho uJerónimo Tristante ethula khona UVictor Ros, umhloli wakhe weMadrid wekhulu le-XIX. URos uyiphoyisa elincane elifihla i- edlule emnyama njengesela kanye nomenzeli ocashile. Manje uphethe i-a iqembu elisha ukulwa nobugebengu kanye nabo icala lokuqala emusa endlini Aranda. Lapho, abesifazane abathathu, ngokuhamba kwesikhathi, bazamile ukubulala umyeni wakhe ngemuva kokufunda isigaba esivela kuDante's Divine Comedy. Kepha futhi ukubulawa kwezifebe eziningana kusukela ngaphansi komhlaba komuzi.
Indlu egwegwile - UChristie Agatha
U-Agatha Christie wayeyingcweti ekumsetheni izimfihlakalo nobugebengu ezindlini noma ezindlini ezinkulu. Kule ndaba le ndlu inelukuluku lokwazi izakhiwo ezincikene. Yindlu lapho kuhlala khona izizukulwane ezintathu zomndeni wezigidigidi zamaGrikhi U-Aristide leonides. Ngakho emaphasejini nasemakamelweni ayo bonke abalingiswa bawela, kusuka kwabancane nabahle Brenda, unkosikazi wesibili wenzalamizi endala kakhulu manje, futhi Sophia, umzukulu wakhe, ozala umukhwe wakhe ngukhomishani wamaphoyisa. Kodwa ke U-Aristide unobuthi futhi wonke amalungu omndeni wakhe angabasolwa.
Kukhona eyodwa inguquko yefilimu yakamuva yalesi sihloko esadlala indawo kaGlenn Close, Terence Stamp noma uGillian Anderson.
Ukuwa kweNdlu ka-Usher - U-Edgar Allan Poe
Enye yezindaba ezishaqisayo kakhulu ngendlu njenge-protagonist. Isithabathaba somuzi wabazalwane baka-Usher siphela ngo URoderick noMadeline ukucwila nabo ngaphambi kokubuka okumangazayo nokwesabekayo komngane wakhe nombalisi yale ndaba lokho kuhlala kukufanele ukuthola noma ukuphinda ufunde.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izindlu zokubhuka zezikhathi zokuhlala ekhaya
Ukungena okunelukuluku futhi okuthakazelisa kakhulu kubalandeli bohlobo.
Njengomnikelo, 'Indlu yamaqabunga' kaDanielewski nakho kwangimangaza.
UStephen King ubezokhuluma ngesiqalekiso seHill House, uShirley Jackson ... 😉